Bakhaar: Muuqaal Sheeko-muuqaal ah oo loogu talagalay iPad-ka | Martech Zone
Khamiis, May 22, 2014 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waxaan dhawaan ku yeelanay webinar ku saabsan sayniska sheeko-wadaagista asxaabteena at Cantaloupe.tv. Maaha wax ku cusub iibka iyo suuqgeynta, laakiin sababo jira awgood, sheeko-qoristu runtii waxay kaliya bilowday inay fiiro gaar ah u yeelato sannadihii la soo dhaafay. Macaamiisha iyo iibsadayaasha ganacsiga markasta way fududaan jireen markay jiraan xiriir shucuur ah oo udhaxeeya iyaga iyo astaamaha ay jecelyihiin… laakiin waxaa xiiso leh inta jir, warbaahin qoraal iyo cabsi leh ay sii wadaan inay nagu dhibaateeyaan telefishanka iyo shabakada.
Way fiicantahay in la arko aalado isbedelaya si ay uga caawiyaan suuqleyda inay horumariyaan sheekooyinkooda halkii ay ka xanaaqi lahaayeen kaydinta ama astaamaha. Bakhaarka waa bilaash app app taasi waxay rajeyneysaa inay tan bedesho. Storehouse waxay u oggolaaneysaa dadka isticmaala inay sheekooyin ka dhisaan qoraal, fiidiyoow, iyo sawirro, iyagoo ku daraya waxyaabaha laga helo ilaha ay ka mid yihiin iPad Camera Roll, Dropbox, Flickr, iyo Instagram
Natiijadu waa qaabab qurux badan oo qurux badan oo ka jawaabaya shabakadda, moobiilka iyo daawashada kiniinka. Haddii aad haysatid barnaamijka iPad-ka, kaliya ma dhisi kartid oo qori kartid sheekooyinkaaga, sidoo kale waxaad ku dhex wareegi kartaa sheekooyinka cusub ee lagu soo saaray Bakhaarrada.
Sidoo kale, aragtida sheekada waxaa lagu dhejin karaa bog internet. Waa tan tusaale:
Natiijada ugu dambeysa waa muuqaal leh karti aan xadidneyn - isku darka dhammaan walxaha iyo ku darista awoodda aad u jeceshahay, wadaagto, ama uga faaloon karto sheekada la wadaago.
Tags: tufaaxacantaloupe.tvsanduuqa hoos loo dhigoFlickrInstagrammacruufkaipadbarnaamijka ipadSuuqgeynta Mobilada iyo MashiinkajawaabStorysheekokiniin